သြဂုတ်လ 2016 | 10 ၏စာမျက်နှာ 132 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » သြဂုတ်လ (စာမျက်နှာ 10)
08 / 30 / 16 11 / 30 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကျနော်တို့အကြီးအအားလပ်ရက်ကြီးမြတ်န်ထမ်းတွေနဲ့စတင်ကြောင်းယုံကြည်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted ယောဘကိုဆွေးနွေးကြရန်အတွက် Worldwide မှ Duration: အမြဲတမ်းလစာ - Purser ပရင်တာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Shipboard! အဆိုပါအပျော်စီးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်ကျနော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးချဲ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ join ဖို့ဒိုင်းနမစ်, လုံ့လရှိသူ, အတွေ့အကြုံရှိကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များရှာကြသည်။ ...
ဇာတ်စင်န်ထမ်းများကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Shipboard - ကမ္ဘာတစ်ဝန်း Duration: အမြဲတမ်းလစာဆွေးနွေးတင်ပြယောဘသည်ဖြစ်နိုင်ရန် 08 / 30 / 16 အပေါ် posted 11 / 30 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကျနော်တို့အကြီးအအားလပ်ရက်ကြီးမြတ်န်ထမ်းတွေနဲ့စတင်ကြောင်းယုံကြည်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ! အဆိုပါအပျော်စီးလိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်ကျနော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးချဲ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ join ဖို့ဒိုင်းနမစ်, လုံ့လရှိသူ, အတွေ့အကြုံရှိကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များရှာကြသည် ...
audio-Visual အော်ပရေတာ - အလင်း
08 / 30 / 16 11 / 30 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကျနော်တို့တျသှငျးခံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရှင်များရှာဖွေနေတဲ့အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted ယောဘကိုဆွေးနွေးကြရန်အတွက် Worldwide မှ Duration: အမြဲတမ်းလစာ - audio-Visual အော်ပရေတာ - အလင်းကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Shipboard တော်မူသောငါတို့၏တိုးချဲ့မိသားစု join ဖို့ကတိကဝတ်များနှင့်မာနထောင်လွှားမှတဆင့်အောင်မြင်မှုအတွက်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ...
audio-Visual အော်ပရေတာ - အသံ
08 / 30 / 16 11 / 30 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကျနော်တို့တျသှငျးခံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရှင်များရှာဖွေနေတဲ့အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted ယောဘကိုဆွေးနွေးကြရန်အတွက် Worldwide မှ Duration: အမြဲတမ်းလစာ - audio-Visual အော်ပရေတာ - အသံကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Shipboard တော်မူသောငါတို့၏တိုးချဲ့မိသားစု join ဖို့ကတိကဝတ်များနှင့်မာနထောင်လွှားမှတဆင့်အောင်မြင်မှုအတွက်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Host က / အိမ်ရှင်မ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Host က / အိမ်ရှင်မကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Shipboard - ကမ္ဘာတစ်ဝန်း Duration: အမြဲတမ်းလစာဆွေးနွေးတင်ပြယောဘသည်ဖြစ်နိုင်ရန် 08 / 30 / 16 အပေါ် posted 11 / 30 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ဂရိတ်အားလပ်ရက်ကြီးမြတ်န်ထမ်းနဲ့စတင်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ! သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်စွန့်စားမှု၏အဓိပ္ပာယ်ပင်လယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ဘောများ onboard အလုပ်လုပ်န်ထမ်းများ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အဖွဲ့ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်ပေါင်းစပ်။ ကျနော်တို့အဘို့ရှာကြသည် ...
ထုတ်လွှင့်အော်ပရေတာ / လက်ထောက်
ထုတ်လွှင့်အော်ပရေတာ / လက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Shipboard - ကမ္ဘာတစ်ဝန်း Duration: အမြဲတမ်းလစာဆွေးနွေးတင်ပြယောဘသည်ဖြစ်နိုင်ရန် 08 / 30 / 16 အပေါ် posted 11 / 30 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကျနော်တို့ယုံကြည်သူမှုတ်သွင်းခံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရှင်များရှာဖွေနေတဲ့အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးချဲ့မိသားစု join ဖို့ကတိကဝတ်များနှင့်မာနထောင်လွှားမှတဆင့်အောင်မြင်မှုပါ။ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကျနော်တို့များကို ...
ထုတ်လုပ်မှု Manager ကိုကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Shipboard - ကမ္ဘာတစ်ဝန်း Duration: အမြဲတမ်းလစာဆွေးနွေးတင်ပြယောဘသည်ဖြစ်နိုင်ရန် 08 / 30 / 16 အပေါ် posted 11 / 30 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကျနော်တို့အောင်မြင်မှုအတွက်ယုံကြည်သူမှုတ်သွင်းခံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရှင်များရှာဖွေနေတဲ့အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား ကတိကဝတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးချဲ့မိသားစု join ဖို့မာနကိုတစျဆငျ့။ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကျနော်တို့များကို ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Host က
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Host ကကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Shipboard - ကမ္ဘာတစ်ဝန်း Duration: အမြဲတမ်းလစာ 08 / 30 / 16 11 / 30 / 16 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ကိုကျနော်တို့အကောင်းဆုံးခရုဇ်အတွေ့အကြုံကိုစိတျနှလုံးမှာစတင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted ယောဘကိုဆွေးနွေးကြစေရန် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုထမ်းအဖွဲ့ဝင်! အဆိုပါအပျော်စီးလိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်ကျနော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်, ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲနေသောရှာကြသည် ...
10 ၏စာမျက်နှာ 132«ပထမဦးစွာ...«89101112 » 203040...နောက်ဆုံး»